Fomba fa tsy finoana ny taom-baovao malagasy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy anniversaire na finoana
Nihaona tamin’ny mpamphalala vaovao ry zareo ao amin’ny Foibe Nasionaly Fitohasina sy ny Foibe Tano Kolotoraly Malagasy ny zoma 27 fevrie teo. Misandratra androny no fotoana nomen’izy ireo. Izay no fotoana tsara ilazana zava-baovao hoy ny mpikarakara. Ian’ny teny nanaitra ny filazana fa ho azy ireo ny “taom-baovao malagasy dia fomba fa tsy finoana”.
Nanazava andriamatoa Victorio Randriamihanta, Sekretera Jeneralin'ny Foibe Trano Kolotoraly, fa ny fomba dia fihetsika na fiteny mety mahazatra ny olona, ka azo hazavaina sy hamarinina ny antony ary koa marina amin’ny rehetra. Noho izany dia azon’ny rehetra hamarinina. Lasa toa siansa izany famaritanana izany. Kanefa fantatra fa misy fomba fanao izay tsy fanta-pihaviana ary tsy hita fototra fa arahina. “Ny taom-baovao malagasy dia tsy hanavahana sokajin’olona na foko na fihaviana na saranga, fa azon’ny rehetra tanterahina na aiza na aiza misy azy” hoy ny avy eo anivon’ny Fitohasina.
Ho an’ireto fikambanana roa ireto dia misy singa efatra lehibe manamarika ny fomba atao amin’ny taom-baovao malagasy. “Famantara, Fidiovana, Tsodrano ary Santatra” ireo singa efatra ireo.
Ny Famantarana dia fanamarhana ny fanombohan-javatra. Saika manaraka ny lamina ara-boajanahary ny Malagasy amin’ny fanombohan-javatra. Izany dia ao aorian’ny sedra goavana iray na maromaro izay mandalo eo amin’ny fiainana. Rehefa lasa izay dia miditra amin’ny fiainam-pahafahana vaovao indray ny olona ary manomboka ny miaka-bokatra.
Ny fidiovana indray dia fanao rehefa avy miala amin’ny sedra goavana. Raisin’ny olona ho fanadiovana ny sedra goavana iray. Fanadiovana ara-baana na ara-piaraha-monina. “Ohatra rehefa avy nanaosika fiara tao anatin’ny fotka dia misasa” hoy Victor ??? Lojika izany. Dia tahaka izany koa ehefa misy fifandirana. Rehefa miroso amin’ny fampihavanana dia misy ny fifamelana endriky ny fidiovana izany izany manolona ny ankohonana na ny fiaraha-monina na ny ùpiara-miasa arakaraka ny teorana nanaovana ny fampihavanana.
Ny tsodrano. Fomba fanao izany na andavanandrom-piainana na amin’ny fotoan-dehibe. Rehfa misy diangam-piainana tiana hahatafitana dia misy ny tsodrano angatahana. “Raha handeha lavitra na hanala fananadinana dia mangataka tsodrano ny voakasika. Ary dia tahala izany koa amin’ny fanombohan’ny taona. Tiana ho tafita soa mandritra ilay taona vaovao ho diavina” hoy ny mpitondran-teny. Matetika dia misy teny atao eo. Indraindray dia misy tokoa ny mifafy rano ara-bakiteny.
Ny santatra. Tsy mahazatra ny sofina ity singa fahefatra ity. Fombamahazatra ny Malagasy ny misantatra ny fiainana amin’nyzavatra tsara rehefa hanomboka fiainam-baovaona hitoetra amin’ny tano vaovao (tsy voatery trano vao nahoriina izany fa mety trano efa nisy fa izay vao hitetra ao ilay olona na fianakaviana iray). Santraina amin’ny zavatra tsara izany. Ohatra fandre matetika dia ny fandrosoana vary amin-dronono tondrahan-tantely. Ireo singa telo (vary, ronono, tantely) nampiasaina ireo dia samy manana ny dikany mafonja avoko. “Tsy fisantarana zavatra tsara ny fandatsahana aina” hoy Victor ??? “Tsy misy fitenenana milaza fa mahasoa ny famonoana omby” hoy izy nanohy ny fanazavany.
Volana no ampiasaina
Rehefa hijery ny daty hanamarihana ny taom-baovao malagasy dia ny volana no jerena. Ny volana fa tsy ny masoandro. Ny volana satria io dia manazava ny fiainan’ny olombelona tsy an-kiato na fotoana andro alina an andro antoandro. Raha ny daty amin’ity taona ity dia ny 20 marsa aorian’ny mitatao vovonana no fenomanana ny volana. Saingy noho izy efa nihilana ny androno mahatonga ny filazana fa ny 21 marsa no lazaina fa taom-baovao malagasy.
Isan’ny mampiavaka ny fanamarihana tontosain’ny Fitohasina sy Trano Kolotoraly dia ny filazana fa tsy natao ho an’ny maty na hahatsiarovana ny maty ny taom-baovao malagasy. Tsy mety raha any amin’ny fasan’olona iray no hanamarihana ny tam-baovao malagasy. Tsy anniversaire io hoy ny kivazivazy nandeha. Tsy azo ampifangaroana amin’ny alamahadibe ny taom-baovao malagasy. Natao ho fomba entin’ny velona handrindra sy hivoarana eo amin’ny fiainany ny fanamarihana ny taom-baovao malagasy.
Tsiahiva fa misy reo antokon’olona sy fikambanan ahafa izay hanamarika ny taom-baovao malagasy eny Ambohitrabiby. Ny daty kosa moa dia mitovy ho an’ireto sokajy roa samy hafa ireto.
Ny Foibe Nasionaly Fitohasina sy ny Foibe Tano Kolotoraly Malagasy dia hanamarika ny taom-baovao malagasy amin'ny toerana maro manomboka ny 20 marsa 2015.